Instagram ကို Fonts: Generator ကို, သင်္ကေတ, အီမိုဂျီ, အွန်လိုင်း Copy ကူးခြင်းနှင့် Paste
Instagram ကိုများအတွက် fonts
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်သင်သည်အသစ်ကဖောင့်တွေအများကြီး Instagram ကိုအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့တွေ့လိမ့်မည်။ Instagram ကိုများအတွက်စာလုံးတွေ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိပါသည်။ အပြင်စံဖောင့်ကနေ, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုမှ Instagram ကိုများအတွက်မဆိုလှပသောစာလုံး generate နိုင်ပါတယ်။ မဆိုအရေးအသားများနှင့်စာသားများကဒီမှာဖန်တီးသင့်ရဲ့ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုမဆိုအညီကူးယူခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးနေပါစေဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သုံးစွဲသူအမည်သို့မဟုတ် status ကိုလိုလျှင်, ပရိုဖိုင်းကိုခေါငျးစဉျအောကျသို့မဟုတ်ပုံပြင်များ, post ကိုသို့မဟုတ် comment ကို။ မျဉ်းသား, ရဲရင့်, စာလုံးစောင်းသို့မဟုတ် Strikethrough: အပြင်အမျိုးမျိုးသောဖောင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုမှာအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းစာသား Generator ကို
အဆင်းလှသော font ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းအတွက် web site ကိုမှာကိုယ်စားပြုမည်သည့်ဖောင့်ကိုသုံးပါရန်အလို့ငှာ, သငျသညျအထူး site ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်လိုအပ်သောစာသားကိုရိုက်ထည့်နှငျ့သငျကြိုက်တယ်ဆို font ကို select လုပ်ပြီးမှရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်ထို site ကနေလှပသောစာလုံးအတွက်စာသားအမျိုးအစားများကိုကူးယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ Instagram ကိုအသစ်ဖောင့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထူးခြားသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဒီဇိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသုံးပြီးသင်ပရိုဖိုင်းကိုခေါငျးစဉျအောကျ၌၎င်း, သင်၏ရေးသားချက်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များနှစ်ဦးစလုံး Instagram ကိုအတွက်ဖောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာသင် Instagram ကိုအတွက် blogging နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့စေနိုင်ရန်အတွက်အထူးသင်္ကေတများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်စာသားအမျိုးမျိုးသောပုံစံများမှ, သင် Instagram ကိုများအတွက်သင်္ကေတများသငျ့တဲ့အကြီးအအကွာအဝေးတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာ, ဒီကနေသင် Instagram ကိုအသုံးပြုသူအမည်အဘို့ကို tick သင်္ကေတကူးယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှထပ်ထည့်ချင်ပါတယ်ကြောင်း Instagram ကိုများအတွက်မဆိုသင်္ကေတများကူးယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Instagram ကိုအတွက် blogging နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ content တွေကိုစီစဉ်နိုင်ရန်အတွက်သင်အမည်သို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းကိုခေါငျးစဉျအောကျအတွက်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ Instagram ကို post ကိုရေးသားနေစဉ်အသုံးပွုနိုငျမည်မျှသင်္ကေတကိုသိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး Instagram ကို post ကိုမည်မျှသင်္ကေတရှိသနည်း
Instagram ကိုပိုပြီးစာသားများထက်ဓာတ်ပုံများများအတွက်လူမှုကွန်ယက်၏, ထို့ကြောင့်အဆိုပါ post ကိုအသံအတိုးအကျယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါကန့်သတ် post ကိုတစ်ဦးလျှင် 2,200 သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါပရိုဖိုင်းကိုခေါငျးစဉျအောကျမည်မျှသင်္ကေတများပါဝင်သည်သနည်း? သင့်အနေဖြင့်ပရိုဖိုင်းကိုခေါင်းစဉ်မှသင့်အချက်အလက်များကို add နိုင်ရန်အတွက် 150 သင်္ကေတများအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် fit မှရပါလိမ့်မယ်။ Instagram ကိုအတွက်မှတ်ချက်အဖြစ်ကောင်းစွာသင်္ကေတန့်အသတ်ရှိသည်: သငျသညျနှစျဦးသင်္ကေတများနှင့်ကြာကြာထက် 1000 သင်္ကေတများထက်တိုတောင်းမှတ်ချက်ရေးဖို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
သင်တို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ် Instagram ကိုများအတွက်အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပြောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျနှစ်ဦးစလုံး Instagram ကိုရေးသားချက်များနှင့်ပုံပြင်များ၌အကြှနျုပျတို့၏ကို web site ပေါ်တွင်ဖန်တီးရုပ်ပြောင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ site ကိုလည်း Instagram ကိုအဘို့အပုံမှန်မဟုတ်သောရုပ်ပြောင်ဖန်တီးနေတဲ့ function ကိုရှိပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်ပရိုဖိုင်းဖော်ပြချက်အဘို့ကြီးစွာသောအီမိုတီကွန်ပေါင်းစပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပို့စ်သို့မဟုတ်ပုံပြင်များမှရုပ်ပြောင်ဖြည့်စွက်၏ပုံစံစာသားများနှင့်ရုပ်ပြောင်အတှကျအသုံးပွုတဆင်တူသည်: အအီမိုတီကွန်အဆိုပါကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Instagram ကိုသို့ paste လုပ်ထားတဲ့ရပါမည်။
ဝဘ်ဆိုက်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အယူအဆကွဲပြားခြားနားသောယူနီကုဒ်သင်္ကေတသုံးပြီးအမျိုးမျိုးသောစတိုင်များ၏ဖန်တီးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါနည်းပညာပိုင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာဖောင့်ဖန်တီးပေမယ့် Instagram ကိုအတူယူနီကုဒ် glyphs သဟဇာတပေါင်းစပ်ပါဘူး။ ယူနီကုဒ် Instagram ကိုကဘာလဲ?
လူအားလုံးတို့သည်ကွန်ပျူတာသတင်းအချက်အလက် binary ပုံစံ (သုညနှင့်သူတို့၏အထူးထူးအပြားပြားပေါင်းစပ်) တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ သင်လက်ရှိဖတ်နေဖြစ်ကြောင်းတောင်မှစာသားသုညနဲ့သူမြားကိုအဖြစ်ဆာဗာမှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာခေတ်ရဲ့အစမှာတစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုးသောစာသားကိုသင်္ကေတရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုရန် binary code ကိုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
1980 ခုနှစ်တွင်ထို binary code ကိုယူနီကုဒ်ကြောင့်စံခဲ့သည်။ ယူနီကုဒ်စာသားကိုသင်္ကေတ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအခွင့်အာဏာသည်။
ယူနီကုဒ်သည်ထင်ရှားမပြုမီ, တိုင်းပရိုဂရမ်မာစာသားကိုသိုလှောင်နှင့် rendering ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြု; မတူညီတဲ့ပရိုဂရမ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှစ်ခုအစီအစဉ်များကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ခဲ့သည့်အခါထိုကြောင့်, အခါတိုင်း, အ«ဘာသာပြန်ဆိုသူ»ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယေဘုယျစံဖို့အကူးအပြောင်းအတော်လေးရှုပ်ထွေးအပေါင်းတို့နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း coding စာသားကိုသင်္ကေတများစုစည်းစနစ်အကူးအပြောင်းလိုခဲ့မခံခဲ့ရကြောင်း, ယူနီကုဒ်ခေတ်မမီတော့အပါအဝင်စနစ်များ, ကူညီပံ့ပိုးရန်အမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတများ၏အစုကိုလျှောက်ထားခဲ့ကြရသည်။ မကြာခင်မှာပဲသင်္ကေတ၏နံပါတ်တစ်အဆမှုနှုန်းမှာကြီးပြင်းများနှင့်လက်ရှိပြုလုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ပြောင်အဖြစ်ကောင်းစွာစာသားကိုသင်္ကေတ ဖြစ်. , ထို့ကွောငျ့, နေ့တိုင်းပေါ်ထွန်းအားလုံးရုပ်ပြောင်ကောင်းစွာအဖြစ်ယူနီကုဒ်ဖြတ်သန်းရတယ်။
ပထမဦးဆုံး 128 ယူနီကုဒ်သင်္ကေတများလက်တင်အက္ခရာသော ASCII သင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ယူနီကုဒ်ပိုပြီး 128 သင်္ကေတထက်များပါဝင်သည်နှင့်သူတို့ထဲကအတော်များများလက်တင်အက္ခရာအလုံးတူပေမယ့်အက္ခရာရဲရင့်သို့မဟုတ်ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ ပိုပြီးရဲရင့်ဖြစ်ခြင်း, စာလုံးစောင်း inverted သို့မဟုတ်မျဉ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏: ဤသင်္ကေတများသာမန် ASCII စာသားကိုပုံနဲ့တူတဲ့ပေမယ့်အချို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခြင်း« pseudoalphabets »ဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်!
အဆိုပါ«စာလုံး»သက်တမ်းအမှန်တကယ်အမျိုးမျိုးသောဒါမှမဟုတ်တချို့ယူနီကုဒ် glyphs မှသက်ဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်၏ set ကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျဖောင့်သောရုပ်ပြ Sans နှင့် Arial, အကြောင်းကိုကြားရကြပြီရပါမည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျမ်းကိုနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာ emojis သို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်အဖြစ်သင်ကူးယူခြင်းနှင့် paste သတင်းအချက်အလက်, အမှန်တကယ်တစ်ဦးချင်းစီစာလုံးအတွက်လက်ရှိသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းအတွက်အသုံးပြုဖန်တီးကြောင်းစာလုံးစောင်းများနှင့်အခြားပီပီအက္ခရာများစာသားဥပမာစာလုံး A နှင့် B, တူ, အမှန်တကယ်သီးခြားသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ဤအကြောင်းအထူးစာလုံးတွေလိုအပ်လဲ? သာမန်စာလုံးတွေကဒီမှာကိုယ်စားပြုကြသည်မှန်လျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့ copy နဲ့ paste နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်! သငျသညျကူးယူသင်္ကေတသာမန် ASCII သင်္ကေတပါလိမ့်မည်နှင့်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ကဆုံးဖြတ်အဖြစ်အချို့သောက်ဘ်ဆိုက်များမှာရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဥပမာ, သငျသညျ, သင့် Instagram ကိုဇီဝသို့ရုပ်ပြ Sans တချို့စကားလုံးများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
အရာအချို့ဖောင်တူသောကြည့်သို့မဟုတ်အချို့စတိုင်များမှာ (ဥပမာမျဉ်းသို့မဟုတ် inverted ရဲရင့်, စာလုံးစောင်း,) ယူနီကုဒ်သင်္ကေတ၏ set ကိုသုံးနေစဉ်သို့သော်ကျနော်တို့ပရိုဖိုင်းအတွက်လှပသောစာလုံး«တုပဖို့»တို့အားဤသို့သောကျမ်းကိုသုံးပါနိုင်ပါလိမ့်မည် ဦးတည်သို့မဟုတ်သင့် Instagram ကိုရေးသားချက်များ၌တည်၏။